Olee otú na-a blockchain Mmepụta - Blockchain News
Ọ bụrụ na ị na-arọ nke na-eke gị onwe gị cryptocurrency, amụta otú e si dee smart contracts na blockchain ngwa, ma aghọtaghị mmemme, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-emepe emepe maka a ogologo oge, ma naanị mụtara banyere cryptocurrencies na chọrọ imughari, ọ bụ omume. Ke ibuotikọ emi, anyị ga-agwa gị otú ị onwe-amụ ajụjụ, ihe ọmụma ga-bara uru na ebe-ahụ na ha.
Olee ụdị isi dị mkpa n'ihi na blockchain development?
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu banyere mmepe nke smart contracts na ụfọdụ nke nyiwe, ọmụmaatụ, Ethereum, mgbe ahụ “isi” na-adịghị mkpa. Ị mkpa na ikike iji search engines na a obere ndidi. onwe Ha, smart contracts na-turu ime kpomkwem mere na ha nwere ike ịmepụta site na ndị na-adịghị karịsịa maara na nzuzo. The naanị ike na pụrụ ibilite bụ enweghị ọzụzụ ihe, n'ihi na nke a technology dị nnọọ eto eto.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu banyere mmepe nke anyị onwe anyị blockchain, mgbe a oké njọ isi dị mkpa. Ma ọ bụ nanị na ọ ga-ezu.
Ihe ọmụma dị aṅaa dị oké ọnụ ahịa na-azụ ahịa
Ndị isi ihe bụ ịghọta otú technology ọrụ. Ọtụtụ n'ime ndị na-agaghị emeli na blockchain mmepe na-metụtara peculiarities nke technology, nke na-adịghị ekwe ka ojiji nke ụfọdụ ntule ihe nakawa etu esi. na nke a na, mbụ isi ike na-ebilite n'oge imikpu ogbo yiri. Otú ọ dị, mgbe i nwere nghọta nke technology onwe ya, nsogbu iji nna otu n'ime mmemme asụsụ na-ede smart contracts agakwaghị bilie. Na mgbakwunye, M ga-ikwu-agụ White Akwụkwọ nke cryptocurrency, na ndabere nke ị na-aga dee smart contracts.
Ọ ga-ekwe omume ịmụta onwe ma ọ bụ mma iji pụrụ iche ọmụmụ?
N'ezie, ọ bụla ihe ọmụma nwere ike ugbu a zụrụ onwe, dịkarịa ala n'ihi na ọtụtụ ndị oru na-tọrọ si na GitHub. Isi nsogbu bụ ọsọ nke inweta ihe ọmụma. N'otu aka ahụ, e nwere ọtụtụ ihe ọmụma banyere blockchain, ma ọ bụ nnọọ na-emighị emi, otú ọtụtụ mgbe ọ ga-aga na nzacha na data. N'akụkụ aka nke ọzọ, e nwere ihe ize ndụ na ị dị nnọọ ikwugharị niile omume nke onye nkụzi, idetuo niile koodu site n'akwụkwọ, ma ị ga-amụta ihe ọ bụla. Ya mere, M ga-ike ikwu na-ewere ọmụmụ ebe i nwere ike ngwa ngwa nweta ihe ọmụma bụ isi na ihe yiri na-onwe-amụ, ọmụmaatụ, setịpụrụ ihe mgbaru ọsọ – mejuputa a akpan akpan oru ngo.
Gịnị mmemme asụsụ na-mkpa?
Anyị kwenyere na ọ na-eme ka mba uche na-ekewapụ ndị mmemme asụsụ site ogo uru maka amụ ihe ọhụrụ. A mmemme asụsụ bụ naanị a ngwá ọrụ na-adabara ụfọdụ ikpe.
Na nnukwu ụlọ ọrụ si Silicon Valley n'ozuzu na e nweghị ihe dị ka ihe a Mmepụta na otu ma ọ bụ asụsụ ọzọ. Ya mere ọ bụrụ na ị nwere ike usoro na ọ bụ nnukwu gbakwunyere. Ọ bụrụ na ị nwere nghọta nke otú e si eme ya n'ụzọ ziri ezi, maara ụkpụrụ ndị bụ isi nke ewu ije na ntule ihe nakawa etu esi buru ibu ọbụna karị plus.
Bara uru isi mmalite a mbido ọkachamara
Anyị nwere ike ikwu na akwụkwọ Mmepụta Andreas M. Antonopoulos. Ọzọkwa, mkpa ka ị gụọ White Akwụkwọ nke cryptocurrency, na ndabere nke ị na-aga ịzụlite. Mgbe ị na-aghọta technology onwe ya, aga na ịgụ akwụkwọ. Anyị adịghị ike ikwu ozugbo malite na ogbugbu nke otu puku na otu Nkuzi, n'ihi na n'ihi na eziokwu na nkà na ụzụ bụ eto eto ezuru, naanị ukara na akwụkwọ nwere ike ije ozi dị ka onye nanị pụrụ ịdabere na isi iyi.
Ma mgbe na-amụ akwụkwọ, ị nwere ike ịga na-arụ dị mfe Nkuzi. Ma koodu ihe atụ, e nwere nnọọ ole na ole na-emeghe isi oru ngo na ndị mfe ịchọta na GitHub.
Ọzọkwa ugbu a na e nwere obodo maka mmepe, telegram chat, online ọmụmụ, iche iche na LinkedIn na na, otú e nwere ekwesịghị ịbụ nsogbu na search maka a obodo.
Olee otú na-a blockchain Mmepụta?
★★★ 7 TOP Blockchain Development Ọmụmụ, Training and Certifications ★★★